Ciidamada Mareykanka Oo Isaga Baxay Soomaaliya – Goobjoog News
in amaanka, Banaadir, Galmudug, Gobalada, Hirshabeelle, Jubaland, K/Galbeed, Puntland, Somaliland, Wararka Dalka
Taliska militariga Maraykanka Africa ee loo yaqaano AFRICOM ayaa xaqiijiyey in la dhammaystiray howlaha ciidamada mareykanka ee ka bixitaanka Soomaaliya .
Gaashaanle Sare Christopher Karns Afhayeenka AFRICOM oo wareeysi siiyay VOA-da ayaa u sheegay in howlaha kabixitaanka la dhammaystiray laba maalmood ka hor waqtigii kama-dambaysta ee uu u qabtay madaxweynaha doorashada looga adkay Donald Trump in ciidankiisa looga saaro Soomaaliya oo ku beegnayd 15-kii Bishaan .
Gaashaanle Sare Christopher Karns afhayeenka ciidamada AFRICOM ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in weli ciidamada badan oo Mareykan ah ay ku hareen gudaha Soomaaliya .
Afhayeen karns ayaa ka gaabsaday in uu ka jawaabo halka la geeyay ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya laga saaray sababa dhinaca Amaanka ah .
Waxa uu sheegay Gaashaanle Christopher in haatan hawgalkooda Mareeykan ay galeen wajigoodii Xigay , iyagoona sheegay in ay xoojin doonan xiriirka Ciidamada Soomaaliya , Waxa uuna wacad ku maray in Maraykaku uu sii wadi doono howl galada ciribtirka ah ee Al-shabab .
JMareeykanka ayaa Soomaaliya waxaa ka soo jogay ciiidamo lagu qiyaaso illaa 700 oo Askari , kuwaasi oo Soomaaliya u joogay in ay tababaraan islamarkaana caawiyaan ciidamada Soomaalida, gaar ahaan ciidanka Danab.
Madaxweyne Trump aya dalbay in ciidanka Maraykanka laga soo saaro Soomaaliya bilaawgii bisha December ee sanadkii tagay.